Biinanka suunka Oo Xaqiijiyay In ay xiriir la hubiyaha ayaa soo afjaray
Biinanka, saaraha ee USDT dollar-taako cryptocurrency ah, ayaa sheegay in ay xiriir la hubinta adag Friedman LLP ayaa ku dhamaaday.
Friedman wuxuu ka shaqeynaayay hubinta ah Biinanka, taas oo uu leeyahay xiriir dhow la sarrifka cryptocurrency ku Bitfinex. dhaleecayn cod oo ka mid ah labada shirkadood ayaa sheeganeysa in Biinanka ayaa daabacaadda calaamadihii ka mid ah hawada khafiif ah in la wado ilaa qiimaha Seeraar on dhaafsiga.
war qoraal ah afhayeenka ayaa saxafadeed akhriya:
“Waxaan xaqiijin in xiriirka la Friedman waa baabba'ay… waxa jira daliil ma qarka u saaran inuu hanuuniyo habka cabbirka wax ka gees ah, taas oo ah inay ku qiyaasto ay guul midna.”
magaalada 2aad Thailand ugu weyn Chiang Mai arkaa mashiinka ugu horeysay Seeraar iibiyo
Mashiinka Seeraar ayaa iibiyo ka dhigan ugu horeeyay ee noociisa ah ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka Thailand, taas oo uu leeyahay in ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool gobolka, aka “metro” Chiang Mai.
Mashiinka ayaa screen taabashada ah oo ka shaqeeya by dhowr code QR a (ineey by phone smart) waayo helo cinwaanka jeebka Seeraar Seeraar ee loo soo diray. Waxa kale oo jira scanner farta print on mashiinka a.
Waxay ku taalaa ee Julius Karangi ayaa loo jecel yahay iyo “Nimman” bedka Chiang Mai. cafe waxaa lagu magacaabaa Cube 7 oo waa cafe a ballaaran leh fadhiga gudaha iyo dibadda, iyo sidoo kale qolka shirka a. Milkiilaha ayaa sheegay in ay qorshaynayaan on aqbalayaan Seeraar waayo, cuntada iyo cabitaanka mustaqbalka dhow, taas oo ka dhigi lahaa iyaga ku biiraan 5 ganacsiyada kale ee magaalada aqbalayaan Seeraar sida ay coinmap.org
Jabsaday Tokyo sarrifka cryptocurrency dib u bixiso milkiilayaasha $ 425M
sarrifka cryptocurrency ku salaysan Tokyo Coincheck Inc ayaa sheegay in on Sunday soo celi lahaa ku saabsan 46.3 bilyan oo Hawiyuhu ($425 million) waxaa guuldarro Anonymous ayaa laba maalmood ka hor mid ka mid ah iyo tuuganimada ugu weyneyd abid ee lacag digital.
Laba ilaha aqoon toos ah arrinta sheegay Wakaaladda Adeegyada Maaliyadeed Japan ee (FSA) ogeysiis inay dalka soo diray si qallafsan 30 shirkadaha ka hawl-weydaarsiga lacagta dalwaddii si uu ugaga Digo sii suurto gal cyber-weeraro, iyaga oo ku boorriyay in ay kor u qaadaya ammaanka.
Mexico waxaa horumarinta nidaamka tartanka blockchain ku salaysan
Xukuumadda Me of ...
Post Previous:Sidee baan ku dhow lumay 200 Seeraar ganacsiga bishan la soo dhaafay